🥇 ▷ Sida loo maamulo Maareeyaha Sawirka Microsoft Office ee Windows 10 [QUICK GUIDE] ✅
Sida loo maamulo Maareeyaha Sawirka Microsoft Office ee Windows 10 [QUICK GUIDE]
Adeegsadayaasha MS Office 2013 iyo 2016 ayaa laga yaabaa inay la yaabeen markay ogaadeen in kutladaas aysan ku jirin Maareeyaha Sawirka Sawirka Microsoft Office.
Maareeyaha Sawirka wuxuu ahaa codsi horay uga mid ahaa MS Office oo ay kujiraan maaraynta sawirka iyo howlaha tafatirka sawirka.
Waagaas, waxay ahayd qalab dhammaystiran oo dhammaystiran oo loogu talagalay hagaajinta sawirka waxaanan ku sharixi doonaa sida loogu sii wado isticmaalkiisa hadda, Windows 10)
Sidee ayaan u maamuli karaa Maareeyaha Sawirka ee Microsoft Office ee Windows 10:
Ma haysan qalab fara badan oo tafatir ah, laakiin Resize, Crop, Rotate, Red saar Eye Red, AutoCorrect, iyo ikhtiyaarrada Midabka ayaa wali waxtar lahaa. Si kastaba ha noqotee, Microsoft ayaa joojisay softiweerka.
Iyadoo ay taasi jirto, waxaad wali sii wadi kartaa Maareeyaha Sawirka MS Office ee Windows 10 sida soo socota:
Marka hore, fur furaha MS Office suite setup wizard (haddii kale setup.exe) ee xafiiska 2010, 2007, ama 2003. Waxaad sidoo kale ubaahan doontaa furaha alaabada ee xafiiska Office.
Gali furaha sheyga si aad u bilowdo saaxirka dejinta. Haddii aad la kulanto qalad gobol marka aad isticmaaleysid furaha badeecadaada, hubi inaad iska eegto hagehan waxtar leh si aad si dhaqso leh u xalliso.
Kuwa aan lahayn saaxiriin hore ee MS Office ayaa isticmaali kara Microsoft InstPoint Designer (SPD) 2010 rakibaha halkii. Waad badbaadin kartaa 32-bit-ka Saamiyaha Naqshadeeyayaasha Muuqaalka 2010 ka boggaan ama kala soo bixi nooca 64 bit version halkan ka daawo.
Xusuusin Waxaad u baahan doontaa inaad gasho barta Microsoft ka hor intaadan soo dejineynin, markaa samee koonto Microsoft haddii aadan horay mid u lahayn.
Kadib fur furaha SharePoint Designer 2010 sixilaha saxda ah ee ka muuqda sawirka tooska ah ee tooska ah.
riix Shaqsiyee badhanka daaqaddaas si aad u kala doorato qaababka qaabeynta ee hoose.
Guji barnaamij kasta oo ku taxan tabta Rakibaadda tab oo xulo Lama heli karo ee menus
Markaas dhagsii + ku xigta agabka xafiiska oo xulo Lama heli karo dhammaan aaladaha xafiiska ku qoran marka laga reebo Maareeyaha Sawirka MS Office.
Markaa waxaad ubaahantahay inaad dooratid liiska hoos udhaca Maareeyaha Sawirka Microsoft Office.
Hadda xulo Ka orod kumbuyuutarkeyga Xulashada Maareeyaha Sawirka.
riix Rakibo Hada badhanka ku dhejiska saaxirka.
Mar haddii dejinta la dhammaystiro, riix buugga Dhow badhanka oo dib u bilow Windows.
Hadda waad furi kartaa Maareeyaha Sawirka! Waa inaad ka heshaa liiska bilowga ama geli “Maamulaha Sawirka” sanduuqa raadinta Cortana.
Hadda waxaad ku tafatiri kartaa sawirradaada Maareeyaha Sawirka mar kale. Shaki la’aan, waa codsi wax ku ool ah oo lagu abaabulo sawirada iyo tafatirka sawirrada aasaasiga ah.
Isticmaalayaasha badankood ma yaqaanaan waxa la sameeyo marka Windows sanduuqa raadinta ay lumaan. Akhri maqaalkan si aad u ogaato sida aad ugu soo celin karto dhawr tillaabo oo keliya.
Xafiisku kama furna kumbuyuutarkaaga Windows 10? Bal u fiirso maqaalkan yaabka leh si aad dhibaatada ugu xalliso waqti la’aan.
Sida had iyo jeer, haddii aad hayso wax kale oo talo ah ama su’aalo ah, xor u noqo inaad uga tagto qaybta faallooyinka ee hoos ku xusan waana hubsan doonnaa inaan hubino.
WAXYAABAHA LA XIRIIRAAN EE AAD LEEDAHAY
Waxaa laga soo xigtay tifatiraha Xusuus: Booskan waxaa markii hore la daabacay Janaayo 2017 waxaana tan iyo markaas gabi ahaanba la cusboonaysiiyay oo la cusbooneysiiyay si loo bixiyo cusub, saxnaan iyo wada jir.